गोरखा लकडाउन : खाद्यान्न पसल र अस्पताल बाहेक सबै पसल, यातायात बन्द | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखा लकडाउन : खाद्यान्न पसल र अस्पताल बाहेक सबै पसल, यातायात बन्द
Published On : १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:३७
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण न्यूनिकरण गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबारदेखि लागु हुने गरी जिल्लाभर चल्ने यातायात सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । साथै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र औषधी पसलबाहेक सबै पसल बन्द गराउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
अन्यावश्यक कामबाहेक बाहिर हिडडुल नगर्न समेत प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी आग्रह गरेको छ ।
‘अस्पताल, क्लिनकलगायतका सेवाहरु सुचारु हुनेछन् । खाद्यान्न पसलहरु पनि खुल्नेछन् । यीबाहेक सबै पसलहरु बन्द गराउने निर्णय भएको छ । जिल्लाभित्रिने र सदरमुकामबाट बिभिन्न ग्रामीण रुटमा चल्ने यातायात सेवा पनि बन्द हुनेछन् । जरुरी काममा बाहेक घरबाहिर हिडडुल नगर्न पनि हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आग्रह गरेका छौं’, प्रजिअ पौडेलले भने, ‘यसलाई अनौपचारिक रुपमा लकडाउन भने पनि हुन्छ । हाम्रो आग्रहको अवज्ञा गरे प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।’
लक डाउनको निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने उनले बताए ।